ဘုရားဟောဒေသနာနှင့်အညီ ဆေးချက်ချကုတာ - ပုဂ္ဂလပညတ် ဆေးပညာ ~ ကျိုးကြောင်းဆက် ပုဂ္ဂလပညတ်
သူတပါးပြုပြင်၍ ဖြစ်လာတာကို သင်္ခါရဟုခေါ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လူ၊ နတ်၊ တိရိစ္ဆာန်လို့ သတ်မှတ် ခေါ်ဆိုကြတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးဟာ သင်္ခါရအစုကြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခေါင်း၊ ခါး၊ ခြေ၊ လက်၊ ကိုယ်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသော (၃၂)ကောဌာသ အစုရုပ်တရားကြီးသည် ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဟူသော အကြောင်းတရားလေးပါး က ပြုပြင်ဖန်တီး၍ ဖြစ်လာကြောင်းကို ကမ္မံ စိတ္တံဥတု အာဟာရောစေတိ စတ္တာရိ ရူပသမုဌာနာနိ ဟုလည်းကောင်း၊ ခံစားမှုဝေဒနာ၊ မှတ်သားမှုသညာ၊ စေ့ဆော်ပြုလုပ်အားထုတ်မှုသင်္ခါရ၊ မြင်ခြင်း၊ ကြားခြင်း၊ နံခြင်း၊ အရသာ၊ ခံစားမှု၊ အတွေ့အထိ၊ ကြံစည်စိတ်ဝိညာဉ် - ဟူသော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးတို့ သည်လည်း ပြင်ပအာရုံနှင့် ရုပ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ စက္ခုစသော အကြည်ပသာဒရုပ်များ ထိတွေ့၍သာ၊ တိုက်ဆိုင်၍ သာ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းကို စက္ခုံ၊ ပဋိစ္စရုပေစ ဥပ္ပဇ္ဇတိ စက္ခုဝိညာဏံ၊ တိဏ္ဏံသင်္ဂဟိ ဖေဿာ၊ ဖဿပစ္စယာ ဝေဒနာ စသည်ဖြင့် ပဋိစသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာမှာ ဟောထားသဖြင့်လည်း ကိုယ်ခန္ဓာဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော ရုပ်တရား၊ နာမ်တရားအစုကြီးသည် အကြောင်း တရားများ ပေါင်းဆုံပြုပြင်၍ ဖြစ်လာသော သင်္ခါရတရားအစစ်ကြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာမဟုတ်ကြောင်း ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် သဘောပေါက်ပါတော့သည်။
အထက်ပါ ဘုရားဟော ဒေသနာအရ လူသားတို့၏ခန္ဓာကိုယ် (ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး) သင်္ခါရ တရားကြီး ဖြစ်ပေါ်လာမှုကို အောက်ပါအတိုင်း ဆက်စပ်ပုံဖော်ကြည့်မိပါသည်။
ဖော်ပြပါပုံအရ ပုဂ္ဂလပညတ်ဆေးပညာရှုထောင့်ဖြင့် ဆေးချက်ချသော် -
အစာအာဟာရနှင့် သောက်ဆေးများဖြစ်သော ပါးစပ်မှ မြိုသွင်းရသော အရသာ (နာမ်ဆေးချက်) လက်ဝဲအုပ်စုနှင့် အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အတွေ့အထိ ဟူသော မျက်စေ့ပေါက်မှ၊ နားပေါက်မှ၊ နှာခေါင်းပေါက်မှ၊ ကိုယ်ခန္ဓာမှ အတွေ့အထိစသော ပြင်ပအာရုံများဖြင့် ပေးကုရသော (ရုပ်ဆေးချက်) လက်ျာ အုပ်စုဟူ၍ ဆေးချက်နှစ်မျိုးဖြင့် လူနာများကို ပေးကုနိုင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ ပုဂ္ဂလပညတ်ဆေးပညာဖြင့် လူနာများကို ဆေးကုရာ၌ ရောဂါဝေဒနာ၏ အဆင့်အတန်း၊ အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ အစာအာဟာရဟူသော ဓာတ်စာ၊ ဆေးဝါးဟူသော (နာမ်ဆေးချက်)များဖြင့်လည်း ကုသည်။ သင့်လျော်သော အဆင်းကို ကြည့်ရှုစေခြင်း၊ သင့်လျော်သောအသံကို နားထောင်၊ ကြားစေခြင်း၊ သင့်လျော်သော ရနံ့၊ မှိုင်း၊ နှာတို့ကို ရှူရှိုက်နံစေခြင်း၊ ကား၊ ရထား စီးစေခြင်း၊ လှည်း၊ လှေ စီးစေခြင်း၊ ဒန်း၊ ပုခက်စီးစေခြင်း၊ ရေပူ၊ ရေအေး၊ စိမ်စေ၊ ချိုးစေခြင်း၊ သဲ၊ မြေ၊ ဖွဲဖို့ခြင်း၊ နေရောင်၊ လရောင်ခံခြင်း၊ ကြက်ထုပ်ထိုး၊ မှိုင်းချွေးခံ၊ အကြောပြင်စသော ခန္ဓာကိုယ် အထိအတွေ့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူနာ၏ အခြေအနေ၊ ရောဂါ၏ အခြေအနေ၊ လက်လှမ်းမီ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်သော ပစ္စည်း၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ တွေ့ကြုံရာ (ရုပ်ဆေးချက်)ဖြင့်လည်း အရေးပေါ် ချက်ချင်း ကုသ၍လည်း ပေးကြပါသည်။
ဘုရားဟောဒေသနာအရ ကိုယ်ကောင်ဟု ခေါ်ဆိုကြသော ဤရုပ်ခန္ဓာအစုကြီးသည် အကြောင်းတရား များ ပြုပြင်၍ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဟု ဆိုသဖြင့် ကောင်းအောင်၊ ဆိုးအောင်၊ ရောဂါရအောင်၊ ရောဂါပျောက်အောင် ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ (အပူစာ၊ အအေးစာ)များဖြင့်လည်းကောင်း၊ တဖန် စိတ်ကိုလည်း ကောင်းစိတ်၊ မကောင်းစိတ် များ၊ သောမနဿ၊ ဒေါမနဿများ၊ ရောဂါဖြစ်စေမည့် စိတ်များ၊ ရောဂါပျောက်စေမည့် စိတ်များ၊ တနည်းအားဖြင့်လည်း ရောဂါပျောက်စေမည့် နာမက္ခန္ဓာများ ဖြစ်အောင် ပြင်ပမှ သင့်လျော်သော ဓာတ်တူ၊ နံတူအာရုံ၊ မိတ်အာရုံ၊ နဝင်းအာရုံများ၊ မတည့်သော ရန်ဓာတ်အာရုံများ၊ အခိုက်ဓာတ်များဖြင့် ပြုပြင်ဖန်တီး၍ ရောဂါပျောက်စေနိုင်သည်။ ရောဂါရစေနိုင်သည်။ ပြင်ပအာရုံများဖြင့် စိတ်မှတဆင့် ရုပ်ကို လိုသလို ပြုပြင်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်မှ သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်ဖြင့် ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဒေသနာ အတိတ်ကံများကြောင့် ယခုဘဝမှ ပသာဒရုပ်များအပါအဝင် ကမ္မဇရုပ်များ၊ အတိတ်ဘဝမှ တဏှာဥပါဒါန်စိတ်ကြောင့် ရရှိခဲ့တဲ့ ယခုဘဝ ရုပ်ခန္ဓာများ၊ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရသော စိတ္တဇဥတုဇ၊ အာဟာရဇရုပ်များ၊ ရုပ်(၂၈)ပါး၊ မဟာဘုတ်လေးပါးတို့သည် ဥပါဒါန်ရုပ်များကိုလည်းကောင်း၊ ဟေတုပစ္စယ၊ အာရမ္မဏ ပစ္စယ၊ အညမည၊ သဟဇာတ၊ အာဟာရ သမ္ပယုတ္တပစ္စယများဖြင့် ရုပ်နှင့်နာမ် အချင်းချင်း အထောက်အကူပြု ကျေးဇူးပြုကြပုံများ ကို ကျိုးကြောင်းဆက်ပုဂ္ဂလပညတ်(၁)တွင် အကျယ်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဤရုပ်ခန္ဓာကြီးသည် အပူအအေးဟူသော ဓာတ်လေးပါးညီညွတ်မျှတနေပါက ကျန်းမာ၍ ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခများ ရရှိနေမည် ဖြစ်ပေသည်။ ဓာတ်လေးပါး အပူအအေး မညီညွတ်၊ မမျှတ၊ ဖောက်ပြန်ပါက မကျန်းမာ၍ ရောဂါရပေမည်။ ဓာတ်တို့၏ ဖိုမ၊ မိတ်ရန်၊ ရုပ်နာမ်နဝင်း ဆင်ခြင်၍ ပိုသောဓာတ်ကို ဖြေညှိခြင်း၊ လိုသောဓာတ်ကို ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို လိုအပ်သလို မွမ်းမံသင်္ခါရပြု၍ ကျန်းမာအောင်လည်း ပြုပြင်ပေးနိုင်သည်။ မကျန်းမာအောင်လည်း ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်မှ အကြောင်းတရားများဖြင့် ပြုပြင်ထားသော ခန္ဓာဟူ၍ အထင်အရှား ဟောထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ ပုဂ္ဂလပညတ် ဓါတ်ဆေးပညာသည် ဘုရားဟောဒေသနာ နှင့်အညီ ဆေးချက်ချ၍ကုသော ဆေးပညာဖြစ်ကြောင်း ကျိုးကြောင်းဆက်တင်ပြလိုပါသည်။
ပုဂ္ဂလပညတ်ဆေးပညာ၏ ကုကွက်များကို ပြန်၍ သုံးသပ်သော် -
ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသော လူနာ၏ပညတ် - မူလဓာတ်ကို မူတည်၍ ဓာတ်၏ သဘာဝ၊ ခံစားနေရသော ဝေဒနာ၏ ပူအေး၊ တက်သက်၊ ပွင့်ပိတ်လက္ခဏာများ၊ တိုက်ကျွေးပေးကုမည့် ဆေးနှင့်ဓာတ်စာ ၏ ဓာတ်သဘာဝ၊ ပူအေး၊ တက်သက်၊ အပွင့်အပိတ်၊ ဖိုမ၊ မိတ်ရန်၊ ရုပ်နာမ်၊ နဝင်းဓာတ်ညှိ၍ ပေးကုရသော ပညာကုဆေးပညာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဖော်နည်းကားပုံသေဆေးဟူ၍ မရှိပါ။ ကုသပေးသူဆေးဆရာ၏ ဇဝနတိက္ခဥာဏ်ဖြင့် သင့်တော်သလို ရုပ်ဆေး၊ နာမ်ဆေးများဖြင့် ဓာတ်ဆင်၍ ကုသသွားကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြခဲ့သော ခန္ဓာငါးပါးဆက်သွယ်မှု ပုံအရ ပြင်ပအာရုံများဖြင့်လည်း စိတ်ကိုပြုပြင်၍ ၄င်းစိတ်မှ ရုပ်ခန္ဓာ၊ တနည်းလည်း ခန္ဓာငါးပါး အတ္တဘောရုပ်ကြီးကို ပြုပြင်ကုသသွားကြပုံ နမူနာအချို့မှာ -
1. Soma Therapyအဖြစ် ဆိုင်းသံ၊ စောင်းသံ၊ စန္ဒယားသံ၊ ပုလွေ၊ ဒိုးပတ်၊ အိုးစည် စသည့် သင့်လျော် သော ဂီတသံ အမျိုးမျိုးကို ဆေးချက်အဖြစ်ပေး၍ ကုသကြသည်။ ဥပမာ- ဂျာနယ်ကျော်မမလေးမှ စိတ်မနှံ့သူ ကလေးမတစ်ဦးကို ဇာတ်ပွဲဆိုင်းပွဲ အသံများ နားထောင်စေခြင်း၊ သူမကိုယ်တိုင် မမာစဉ်က ကက်စက်ဆိုင်းသံ နာခံ၍ ကုသခဲ့ပါသည်။
2. Visual (or) Audiovisual Therapy ရူပါရုံ၊ သဒ္ဒါရုံတို့ကို ဆေးချက်အဖြစ် ဖန်တီး၍ (ရုပ်မြင်သံကြား) ကုသချက်ကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ - အထက်ပါဥပမာမှ ဇာတ်ပွဲ၊ အငြိမ့်ပွဲ ကြည့်ရှုစေ၍ ကုသခြင်းသည် ရုပ်မြင်သံကြားကုနည်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
3. Aroma Therapy ဂန္ဓာရုံဆေးချက်အဖြစ် ရနံ့ကုထုံးကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ- ဂျာနယ်ကျော် မမလေး သူမကိုယ်တိုင် မမာစဉ်က ဒေါနပန်း၊ နှင်းဆီပန်းများ တပွေ့တပိုက် ဒါန်းမှာ အလှဆင်၍ ရနံ့ပေးကုသခဲ့သည်မှာ သာဓကပင် ဖြစ်ပါသည်။
အလားတူ သတိလစ်၍ တက်နေသော ဦးကုလားကို ရေနံညော်၊ ငြုပ်သီးညှော်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သေငယ်ဇောဖြင့် မြောနေသည့် တီဘီလူနာဦးလှမောင်ကို အုန်းဆံမှိုင်းတိုက်၍လည်းကောင်း၊ မျက်ဖြူဆိုက်၍ တက်နေသည့် မောင်အောင်ကို နံ့သာဖြူ၊ ကရမက်မှိုင်းအနံ့ဖြင့် အရေးပေါ်ကုသချက်များသည် (ရနံ့ကုထုံး)၏ ထင်ရှားသော သာဓကများပင် ဖြစ်ပါသည်။
4. Touch Therapy ဖောဌဗ္ဗာရုံဟူသော အတွေ့ဖြင့်ကုထုံးကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဥပမာ -
(က) Hydro-Therapy ရေစိမ်ကုထုံးကို ဂျာနယ်ကျော်မမလေးကိုယ်တိုင် ရေစိမ်၍လည်းကောင်း
(ခ) ဦးဟင်ဝေး၏လက်မှ နှင်းခူအနာ ရေစိမ်၍ ဆေးလိမ်းကုသပေးခဲ့သည့် ဂျာနယ်ကျော်၏ကုထုံး
(ဂ) ဆရာကြီးဦးကျန်မှ နာတာရှည် ကိုယ်ယောင်လူနာတစ်ဦးကို တစ်နေ့(၃)ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်လျှင် (၁)နာရီကြာ၊ ရွှံ့ရေအိုင်တွင် (၂)ရက်စိမ်၍ ကုသပြီး နောက်ရက်ဓာတ်စာကျွေး၍ ပျောက်ကင်းစေခဲ့ကြောင်း
(ဃ) မနေနိုင်အောင် ဗိုက်နာ၍ အော်ဟစ်နေရသော ကိုအောင်ရ၊ စိန်နဲ့သံပုရာစား၍ သေလိုပါသည် ဆို၍ ဆရာလှိုင်မှ စိန်နဲ့သံပုရာဖျော်ပြီး ဖွဲကြမ်းပုံမှာမျက်နှာဖော်၍ တညလုံးမြုပ်ခါကုခဲ့သောကုထုံး
(င) ခွဲစိတ်ကုသ၍ မပျောက်နိုင်သော ဆင်ခြေထောက်ဝေဒနာ - ခြေကိုမြေမှာမြှုပ်၍ ကုခဲ့သော ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၏ ကုထုံး
(စ) Photo Therapy နေရောင်၊ လရောင်ခံ၍ ကုသခြင်း၊ ယပ်လေ၊ ပန်ကာလေစသည့် အတွေ့များဖြင့် လည်း ကုသသည်။
စသည် စသည်တို့သည် အတွေ့ဟူသော ဖောဌဗ္ဗာရုံ (Touch Therapy)ဖြင့် ကုသပေးခြင်း၏ သာဓကများပင် ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါကုထုံးများသည် ဘုရားသခင် ဟောကြားတော်မူသော ပြင်ပအာရုံနှင့် အတွင်းရှိပသာဒ ရုပ်များပေါင်းဆုံရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော နာမ်ခန္ဓာလေးပါး (တနည်း) ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော စိတ်ကို ဗုဒ္ဓနည်းကျ သင့်လျော်သော မိတ်၊ ဓာတ်၊ နဝင်းတို့ဖြင့် ဓာတ်ဆင်၍ (ရုပ်ဆေးချက်)အဖြစ် သင်္ခါရပြုခြင်း (တနည်း) ဆေးကု ပေးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့သင့်လျော်သော အာရုံ၊ ဓာတ်တို့ဖြင့် သင်္ခါရပြုပြင်ဓာတ်ဆင်ပေးထားသော စိတ်မှ မကျန်းမာ၍ ရောဂါခံစားနေရသော ရုပ်ကြီးကိုလည်းကောင်း၊ နာမက္ခန္ဓာ စိတ်ဝေဒနာ ကို လည်းကောင်း၊ ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း အချင်းချင်း ဆက်သွယ် ၍ ပြုပြင်ကုသပေးပြီး ဖြစ်တော့သည်။
အလားတူပင် အတွင်းမှ ရသာရုံဖြစ်သော ဆေး၊ အာဟာရဓာတ်တို့ဖြင့် အပူ၊ အအေးဟူသော ဥတု၊ ဆေး၊ အစာဟူသော အာဟာရတို့ဖြင့် ပူအေး၊ တက်သက်၊ ပွင့်ပိတ် သင့်လျော်အောင် ဓာတ်ဆင်ဆေးချက်ချ ကုသပေးသဖြင့်လည်း ရူပက္ခန္ဓာဖြစ်သော ရုပ်တရားကြီးကိုလည်းကောင်း၊ ၄င်းရုပ်တရားကြီးမှ နမက္ခန္ဓာဟူသော စိတ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ အချင်းချင်းအညမည၊ သဟဇာတပြုကြ၍ ကာယသုခ၊ စိတ္တသုခဟူသော ကျန်းမာခြင်း လာဘ်ကြီးကို ရရှိစေပါတော့သည်။
သို့ပါ၍ (ဘုရားဟောဒေသနာနှင့်အညီ ဆေးချက်ချကုတာ ပုဂ္ဂလပညတ်ဆေးပညာ)ဟူ၍ ကျိုးကြောင်းဆက် တင်ပြအပ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလပညတ်ဓာတ်ဆေးပညာသည် ဗုဒ္ဓနည်းကျ ဒေသနာဆေးပညာ တစ်ရပ်ဖြစ်၍လည်း မတိမ်ကော၊ မပပျောက်စေရေး တတ်စွမ်းသူဆရာကြီးများမှ ဝိုင်းဝန်းဖော်ထုတ် ထိန်းသိမ်း နိုင်ကြပါရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
စာအုပ် download link လေးပေးလို့မရဘူးလားရှင်